Gudoomiye Degmo oo arrinta Muuse Suudi xilkiisa ku waayay!! - Muqdisho Online
Home News Gudoomiye Degmo oo arrinta Muuse Suudi xilkiisa ku waayay!!
Guddoomiyaha Gobolka Baanadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Cabdiraxaam Cumar Cismaan (Eng.Yariisow) ayaa gelinkii dambe ee galabta waxa uu isbedel ku sameeyay qaar kamid ah Guddoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir.
Guddoomiyeyaasha Degmooyinka ee isbedelka uu ku sameeyay Guddoomiye Yariisow ayaa waxa kamid ah Degmada Kaaraan,Wadajir,Cabdicasiis,Dharkeenley,Shibis iyo degmada Howlwadaag,isla markaana waxa uu xilakii ka qaaday kamid ah Guddooomiyeyaashaas,iyadoo kuwo cusub u magacaabay.
Cabdifataax Xaaji Nuur (Yaanyo) oo ahaa Guddoomiyihii degmada Kaaraan ee Gobolka Banaadir ayaa waxa lagu bedelay Guddoomiye kuxigeenkii Degmada hiliwaa oo lagu magacaabo Abshir Kaaraan,isagoona (Yaanyo) loo bedelay Degamad hiliwaa.
Intaasi kadib ayaa waxaa Caawa Xarunta degmada Kaaraan gaaray Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya,iyadoona xilka si xoog ah ugu wareejiyay Guddoomiyaha cusub ee degmadaas ee loo magacaabay.
Guddoomiyihii hore ee Kaaraan (Yaanyo) ayaa lagu amray in si deg deg ah xilka uu ugu wareejiyo Abshir Kaaraan,isagoo isla Caawa Wareejiyay xilkaas.
Warar ay heshay Shabakadda Allmaareg ayaa sheegaya in sababta xilkii looga qaaday Cabdifataax Xaaji Nuur (Yaanyo) oo ahaa Guddoomiyihii Kaaraan ay tahay,maadaama uu ku heebyahay Senator Muuse suudi Yalaxow oo xiisad ay kala dhaxeyso dowladda Soomaaliya gaar ahaan Guddoomiye Yariisow.
Ilo wareedyo ayaa sidoo kale waxa ay inoo sheegeen in (Yaanyo) laga cabsaday in Ciidamo dheeraad ah uu siiyo Senator Muuse Suudi oo haatan qeybo kamida ah degmada Kaaraan ku heysto Ciidamo aad u hubaysan ,kuwaasi oo taabacsan isaga,isla markaana xiisad xoogan oo ka dhalatay dhul ku yaalla Xaafadda Mariino ay haatan ka taagan tahay Magaalada Muqdisho gaar ahaan degmadaas.
Previous articleHirshabeelle oo laga yaabo in ay xariirka u Jarto Dowlada dhexe (Ogoow sababta)
Next articleDad ku dhintay shil ka dhacay Magaalada Beydhabo